ထူးထူးခြားခြား ကားအလှဆင်နည်းများ | CarsDB
Creative ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်ခြင်းတို့ကို သင်ဘယ်လို ခွဲခြားမလဲ? တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်.။ ခုတင်ပြထားတဲ့ ကားအလှဆင်နည်း၊ ပြုပြင်နည်းတွေကတော့ အများစုစိတ်ထဲမှာ ထူးခြားတာထက် ကြောင်တယ်လို့မြင်တဲ့ အမြင်က ပိုများသွားနိုင်ပါတယ်.။ ကြည့်ကြည့်ပါ.. ပြီးရင် ခုပြထားတဲ့နည်းများနဲ့ သင့်ကားကို အလှဆင်မလား စဉ်းစားပါ..
ရဲသား နဲ့ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေးသမားတွေကိုင်တဲ့ Riot Shield ဖြင့် အလှဆင်ထားခြင်း
အဆင်ပြေသလိုပေါ့၊ ဓါတ်ခဲတော့ နည်းနည်းကုန်မယ်
ဓါတ်ဆီခိုးမှာလဲ မကြောက်ရတော့ဘူး၊ ကိုယ်လဲ သိပ်ဖလန်းဖလန်းမထနိုင်တော့ဘူးပေါ့၊ သော့ကို မိန်းမသိမ်းသွားရင်တော့ မသိဘူး..
ဈေးလဲမကြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လဲ ထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်၊ လက်ရာကလဲ Original အတိုင်းပါပဲ
လုံခြုံစိတ်ချရခြင်းရဲ့ သက်သေ (သို့) သစ်သားတံခါး
ရရာနဲ့ပဲ ကောက်တပ်လိုက်တော့တယ်၊ လမ်းပြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တင်းလဲတင်းပေါ့
ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ အပူဒဏ်ကို မစိုးရိမ်ရလေအောင် ကိုယ်ပိုင် Aircon ဆောင်ထားပါ
တကယ်တော့ သေးသေးကြီးကြီး ဘီး က ဘီးပါပဲ၊ City Mart က ဈေးဝယ်လက်တွန်းလှည်းကပဲ ဖြုတ်လိုက်တယ်
Auto ခေါက်သိမ်းလို့မရတာကလွဲရင် Ferrari လိုပါပဲ
နောက်ဆုံးပေါ် ဇိမ်ခံကားတစ်စီး ဝယ်လာတယ်
အပြင်သွားရင်း တစ်ခုခုစားဖို့ ခက်ရင်းပါ အဆင်သင့်ယူလာတယ်
Creative ဖွဈခွငျးနဲ့ ကွောငျတောငျတောငျနိုငျခွငျးတို့ကို သငျဘယျလို ခှဲခွားမလဲ? တဈဦးတဈယောကျအတှကျ ဆနျးသဈတီထှငျထားခွငျးဖွဈပမေယျ့ အခွားတဈယောကျအတှကျတော့ ကွောငျတောငျတောငျနိုငျနတောဖွဈနိုငျပါတယျ.။ ခုတငျပွထားတဲ့ ကားအလှဆငျနညျး၊ ပွုပွငျနညျးတှကေတော့ အမြားစုစိတျထဲမှာ ထူးခွားတာထကျ ကွောငျတယျလို့မွငျတဲ့ အမွငျက ပိုမြားသှားနိုငျပါတယျ.။ ကွညျ့ကွညျ့ပါ.. ပွီးရငျ ခုပွထားတဲ့နညျးမြားနဲ့ သငျ့ကားကို အလှဆငျမလား စဉျးစားပါ..
ရဲသား နဲ့ အဓိကရုဏျးနှိမျနှငျးရေးသမားတှကေိုငျတဲ့ Riot Shield ဖွငျ့ အလှဆငျထားခွငျး
အဆငျပွသေလိုပေါ့၊ ဓါတျခဲတော့ နညျးနညျးကုနျမယျ
ဓါတျဆီခိုးမှာလဲ မကွောကျရတော့ဘူး၊ ကိုယျလဲ သိပျဖလနျးဖလနျးမထနိုငျတော့ဘူးပေါ့၊ သော့ကို မိနျးမသိမျးသှားရငျတော့ မသိဘူး..
စြေးလဲမကွီး၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြလဲ ထိနျးသိမျးပွီးသားဖွဈ၊ လကျရာကလဲ Original အတိုငျးပါပဲ
လုံခွုံစိတျခရြခွငျးရဲ့ သကျသေ (သို့) သဈသားတံခါး
ရရာနဲ့ပဲ ကောကျတပျလိုကျတော့တယျ၊ လမျးပွငျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ တငျးလဲတငျးပေါ့
ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီမှာ အပူဒဏျကို မစိုးရိမျရလအေောငျ ကိုယျပိုငျ Aircon ဆောငျထားပါ
တကယျတော့ သေးသေးကွီးကွီး ဘီး က ဘီးပါပဲ၊ City Mart က စြေးဝယျလကျတှနျးလှညျးကပဲ ဖွုတျလိုကျတယျ
Auto ခေါကျသိမျးလို့မရတာကလှဲရငျ Ferrari လိုပါပဲ
နောကျဆုံးပျေါ ဇိမျခံကားတဈစီး ဝယျလာတယျ
အပွငျသှားရငျး တဈခုခုစားဖို့ ခကျရငျးပါ အဆငျသငျ့ယူလာတယျ
Posted at: 25-02-2015 13:30 PM